एउटै अभियोगमा आमालाई जन्मकैद, बाबुलाई सफाइ — Imandarmedia.com
एउटै अभियोगमा आमालाई जन्मकैद, बाबुलाई सफाइ
ओखलढुंगा । पूर्णबहादुर थापा मगर र गुनिसा थापामगरले २०६९ वैशाखमा प्रेम विवाह गरे। विवाहपश्चात् उनीहरुको जीवन सामान्यरुपमा बितिरहेको थियो। उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले पूर्णबहादुरले विदेश जाने सोच बनाए। श्रीमती गुनिसासमेतको घरसल्लाहमा दुई वर्षपछि पूर्णबहादुर वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गए। पूर्णबहादुर मलेसिया जाँदा गुनिसा ६ महिनाकी गर्भवती थिइन्।
पूर्णबहादुर र गुनिसाबीच फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो। पूर्ण पैसा पनि पठाइरहन्थे। घर खर्च राम्रै चलिरहेको थियो। श्रीमान् विदेश गएको चार महिनापछि गुनिसाले छोरी जन्माइन्। उनी २०७१ चैतमा सासूससुरा बाट छुट्टिएर आठ महिनाकी छोरी साथमा लिई बस्न थालिन्। त्यो बेला उनको दुई वर्ष कान्छो देवर सोमबहादुर थापामगरसँग अवैध सम्बन्ध सुरु भएको थियो।
सासूससुराबाट छुट्टिएर बस्न थालेसँगै देवरसँग शारीरिक सम्पर्क हुन थाल्यो। २०७२ फागुनमा उनको महिनाबारी रोकियो। यो कुरा उनले सोमबहादुरलाई सुनाइन्। केही चिन्ता नलिन र आफूले सबै व्यवस्था गर्ने आश्वासन देवरबाट पाएपछि उनी ढुक्क बसिन्। गर्भ रहेको जब सात महिनाको पुग्यो, उनी अत्तालिन थालिन्। देवरसँग सल्लाह माग्दा कसैले थाहा नपाउनेगरी जन्माउनू अनि लगेर फाल्नू भनेपछि जन्मेको बच्चा फालेको उनले प्रहरीमा बयानका क्रममा बताएकी छन्।
भाउजूसँग अवैध सम्बन्ध राखी जन्मेको शिशु मार्न लगाउने देवरलाई साक्षी प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ भने आमालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको छ। गुनिसाले २०७३ मंसिर ४ गते जीवित जन्मेकी शिशुलाई घरनजिकैको खाल्डे चर्पीमा फालेकी थिइन्।
बुहारीले बच्चा मारेर फालेको भनी प्रहरीमा ससुरा बिगबहादुर थापामगरले जाहेरी दिएका थिए। अवैध यौन सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चा मारेर फलेको अभियोगमा गुनिसा र उनका देवर सोमबहादुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो।
एउटै अभियोगमा पक्राउ परेका सोमबहादुर र गुनिसालाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले फरकफरक आदेश सुनायो। २०७४ वैशाख १९ गते गुनिसालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको अदालतले सोमबहादुरलाई भने सफाइ दियो। गुनिसालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भए पनि पाँच वर्षमात्र कैदमा राख्न भनी साबिक मुलुकी ऐन १८८ नं. बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको जिल्ला अदालत ओखलढुंगाका स्रेस्तेदार नेत्रबन्धु पौडेलले बताएका छन्। सर्वोच्चबाट साधक सदर मिसिल कार्यालयमा अझै नआई पुगेको स्रेस्तेदार पौडेलको भनाइ छ।
देवरको आदेशमा गुनिसाले शिशु मारी फालेको बयान दिए पनि यसमा सोमबहादुरको प्रत्यक्ष भूमिका नभएकाले अदालतबाट सफाइ पाएको निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिर्जना घिमिरेको भनाइ छ। साक्षी प्रमाण नपुगेकाले सोमबहादुरले सफाइ पाएको उनले बताइन्।
‘यस कार्यालयबाट शिशु मारिफाल्न आदेश दिने देवर सोमबहादुर थापामगरका लागि जन्मकैद र गुनिसा थापामगरका लागि सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग दाबी गरिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘माग दाबीअनुसार नै दुवैजनालाई सजायका लागि उच्च अदालतमा पुनारावेदन गरिएको छ।’ गुनिसाले अहिले जिल्ला कारागार ओखलढुंगामा कैद भुक्तान गरिरहेकी छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
२०७५ माघ २१ गते प्रकाशित
जापान जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आयो दुखद खबर, हेर्नुहोस् कारणसहित
एकता घोषणाकै दिन ओली-प्रचण्डको मञ्चमै लफडा
निर्वाचन आयोगको लापरबाही, १९ करोडको मतदाता शिक्षा सामग्री खेर गयो
कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास नै बेचिदिए
ओलीको सेना परिचालनसम्बन्धि प्रस्तावको बिरोध गर्ने सेनाका दुई पूर्वसहायक रथीलाई यस्तो कारवाही
अध्यक्ष र सचिवको आतंकले संसद सचिवालयका कर्मचारी तनावमा, सभामुख हेरेको हेरेइ
श्रीलंकामा फेरि अर्को भयानक विस्फोट, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३ सय ६० पुग्यो
तत्काल राजीनामा दिन प्रहरी र सेना प्रमुखलाई श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको निर्देशन
काठमाडौं महानगरको यस्तो निर्णयले अभिभावकहरुलाई खुसी
जापानी भाषा परिक्षा कहिलेबाट सुरु हुँदैछ ? यस्तो छ नयाँ खबर
यी हुन पेटको बोसो घटाउने उपायहरु
पूर्वएमालेबाट को-को बन्दैछन् पोलिटब्युरो सदस्य हेर्नुहोस् नामावलीसहित
भूकम्पको चार वर्ष – केछ पुनर्निर्माणको अवस्था ?
भुइँचालोको सम्झनामा बारपाकमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा
विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने नेपाली जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ – प्रधानमन्त्री
२७ वर्षपछि कोमाबाट बौरिएकी आमाको मुखबाट निस्केको पहिलो शब्द- छोराको नाम
नेपाल बन्दमा कहाँ-कहाँ भए बम विस्फोट र आगजनी, यस्तो छ क्षेतिको विवरण
भवानी ग्रुपको उद्घाटन गर्दै निर्माण व्यवसायी अध्यक्ष सिंहले भने- सरकारले पूर्वाधारमैत्री ऐन ल्याओस्
एमाले-माओवादीबाट को-को बने जिल्ला अध्यक्ष र सचिव ? हेर्नुहोस् ७७ वटै अध्यक्ष-सचिवको नामसहित
भक्तपुरको बिस्केट जात्रामा स्थानीयहरुबीच झडप, अबस्था तनावग्रस्त, ९ घाइते
आदर्श र असल गिरफ्तार परेपछि विप्लव आक्रोशित
एकाबिहानै साहुखर्कमा बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
लापरबाही गर्ने कर्मचारीमाथि प्रेस काउन्सिलले कारबाही थाल्यो
दुई मिनेट चलेको ज्यानमार हावाहुरीले कसरी पुर्‍यायो यति ठुलो क्षति ? यस्तो रहेछ डरलाग्दो कारण
नेपाल बन्द फिर्ता लिएपछि विप्लवलाई बारले दियो धन्यवाद, अरु कसले के के भने ?
सञ्चारमन्त्रीलाई खुलापत्र- भ्रमको खेती र राज्यको भजनमण्डली हामी गर्न सक्दैनौं
विप्लवले यसकारण लिए १६ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता, हेर्नुहोस् विज्ञप्तिसहित
प्रहरीको भ्यानलाई लक्षित गरी शक्तिशाली बम विस्फोट, भयो ठुलो मानवीय क्षति
करछली गर्ने एनसेलबिरुद्ध ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ अभियान सुरु
प्रचण्ड काण्डै काण्डमा मुछिएका यी बिबादित व्यक्तिसँग अमेरिका गएको खुलासा
भोलि ५ गते नेपाल बन्द, पूर्वसन्ध्यामा नेकपाले गर्‍यो यस्तो अपिल
अछाममा नेकपा कार्यकर्ता सामत्न प्रहरीले ७ राउण्ड गोली चलायो, ४ जना गिरफ्तार